आफ्नो पाद बेचेर पैसा कमाउँथिन, धेरै पैसा कमाउन पाद्न खोज्दा अस्पताल भर्ना ! - jagritikhabar.com
आफ्नो पाद बेचेर पैसा कमाउँथिन, धेरै पैसा कमाउन पाद्न खोज्दा अस्पताल भर्ना !
आफ्नो पाद बेचेर करोडौं रुपैयाँ कमाएको दावी गर्ने अमेरिकी रियालिटी टिभी स्टार स्टेफनी मट्टो एक पटक फेरि चर्चामा छिन्। मट्टोले अनलाइन पाद बेच्ने व्यवसाय बन्द गर्नु परेको छ किनकि धेरै पाद्दा उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ।
एक पटक त उनलाई अस्पतालमा भर्ना समेत गर्नु परेको छ। ३१ वर्षकी स्टेफनी पूर्व रियालिटी स्टार हुन्। उनी अमेरिकी रियालिटी हो ९० डे फियोन्से’बाट चर्चामा आएकी थिइन्।
विगत केही समयदेखि उनले अनलाइनबाट पाद बेचिरहेकी थिइन्। हामीलाई यो सुन्दा अचम्म लागे पनि उनले भने यसरी पाद बेचेर मोटो रकम कमाइ गरिरहेको बताएकी थिइन्।
डेलीमेलको एक रिपोर्टअनुसार स्टेफनीले स्वयंले आफ्नो पाद बेच्ने व्यवसाय बन्द गर्ने घोषणा गरेकी छिन्। उनका अनुसार प्रतिकूल डाइट र अत्याधिक पादले उनको स्वास्थ्य बिग्रियो र उनलाई अस्पताल भर्ना हुनुपर्यो।
स्टेफनीका अनुसार उनलाई छातीमा तीब्र पीडा भयो त्यसपछि उनले आफूलाई अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पाइन्। स्टेफनीका अनुसार त्यतिबेला उनलाई हृदयाघात वा स्ट्रोक भएको भन्ने लागेको थियो।
तर, डाक्टरहरुले जाँचपछि यो ग्यास अर्थात पाद सम्बन्धी समस्या भएको बताए। उनले धेरै पाद्नको लागि गेडागुडी, अण्डा र केरा प्रोटिन शेक लगातार सेवन गर्दा पेटमा अधिक ग्यास बनिरहेको थियो।
तेस्तै, कुनै पनि गाउँको नाम अश्लीलता झल्काउने भयो भने त्यहाँका बासिन्दालाई आफ्नो गाउँको नाम बताउनै कठिन हुन्छ । युरोपेली देश अष्ट्रियाका एक गाउँका नागरिकले कैयौं वर्षदेखि यो पीडा सहँदै आएका थिए।
तर, अब भने आउँदो जनवरी १ देखि उनीहरुले यो पीडा सहनुपर्ने छैन। अब यो गाउँको नाम परिवर्तन गरिँदैछ। अहिले यो गाउँको नाम (F***ing) हो। अब भने यो गाउँको नाम परिवर्तन हुनेछ।
जर्मन अखबार डायचे वेलेका अनुसार अब यो गाउँको टाउन काउन्सिलले गाउँको नाम परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। जनवरी १ देखि यो गाउँको नाम फगिंग (Fugging) हुनेछ।
यहाँका मेयर आन्द्रिया होल्जनरका अनुसार बाहिरबाट आउने पर्यटकले जब यो गाउँको नामबारे थाहा पाउँथे त्यसपछि यो गाउँको सीमामा राखिएको साइनबोर्डमा गएर फोटो खिचाउँथे।
ती तस्वीरलाई सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्थे जसका कारण गाउँको बेइज्जती भइरहेको थियो।रिपोर्टका अनुसार अष्ट्रियाको इन्भर्टेल क्षेत्रको टार्सडर्फ नगरपालिकाभित्र यो गाउँ पर्छ।
यो गाउँ साल्जबर्ग शहरबाट ३३ किलोमिटर टाढा छ। यो जर्मनीको सीमासँग जोडिएको छ। यो गाउँमा पर्यटकको आवतजावत २००५ देखि बढ्न सुरु भएको हो जतिबेला मानिसहरुले यो गाउँको सीमामा रहेको साइनबोर्डसँग तस्वीर खिचेर सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्न थालेका थिए।
केहीले त साइनबोर्ड नै चोरी गरेका थिए। २०२० मा भएको जनगणनाअनुसार यो गाउँमा ३२ घरमा १०६ जना नागरिक छन्। यो गाउँको स्थापना छैटौं शताब्दीमा बवेरियन समुदायका फोको नामका व्यक्तिले गरेको मानिन्छ।
सुरुमा यो गाउँको नाम अर्कै थियो तर १८ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा नाम अपभ्रंश भएर यस्तो भएको मानिन्छ। यो गाउँमा कुनै अपराध हुँदैन। पछिल्लो डेढ दशकमा यो गाउँमा रेकर्ड भएको सबैभन्दा ठूलो अपराध यो गाउँको साइनबोर्ड चोरी हुनु थियो।